Akohlulwanga kudidi-kwiiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / Akohlulwanga
ezaposwa ngomhla Februwari 5, 2021 Februwari 5, 2021
Ndiyakuthanda ukusebenzisa eyam Iifayile zeRFinder HCP-1 i-hotspot naphina apho ndiya khona. Okokuqala, kuba ndingasebenzisa ngokulula iBrandmeister kunye ne-TGIF Talkgroups ngaphandle kokwenza naluphi na utshintsho kwi-hotspot nakweyesibini, ngenxa yebhetri yayo yangaphakathi, ndingayisebenzisa ngaphezulu kweeyure ezi-5, nokuba ndiphi - ndisebenzisa uqhagamshelo lweWifi oluthintelwe kwi-smartphone yam . Isebenza njengebhanki yamandla, kwimeko apho ndifuna ijusi yamandla kwi-smartphone yam.
Ndiyakwazi ukucwangcisa iinethiwekhi ezi-3 ezahlukeneyo ezilungele ukusetyenziswa. NdineBrandmeister, TGIF (legacy) kunye ne-TGIF (prime).
The Iifayile zeRFinder HCP-1 I-hotspot yi-PI-star esekwe, kunye neMMDVM. Konke okufuneka ukwenze, kukuyicwangcisa njengesango leDMR. Emva koko, yiya ku Uqwalaselo> Ingcali kwaye nqakraza Hlela ngokupheleleyo> DMR GW.
Xa ndifuna ukusebenzisa iBrandmeister Talkgroup, ndisebenzisa i-TG yesiqhelo. Ndiyathetha, ukuba ndifuna ukubiza TG 91, ndisebenzisa nje i-TG91.
Ukuba ndifuna ukusebenzisa i-TGIF (iLifa) kwaye ndifuna ukusebenzisa i-TG 777, ndicofa u-TG5000777 Ngokusisiseko, ndifuna ukuqala ngo '5', pad ngo '0' ndide ndifumane inani eli-7 lilonke.
Ukuba ndifuna ukusebenzisa i-TGIF (iNkulumbuso) kwaye ndifuna ukusebenzisa i-TG 31039, ndicofa i-TG4031039 Ngokusisiseko, ndifuna ukuqala ngo '4', pad ngo '0' ndide ndifumane inani eli-7 lilonke.
Into ekufuneka ndiyenzile kukucwangcisa irediyo yam ngee-TGs ezahlukeneyo. I-BM ihlala ihleli ingagqibekanga, iNkulumbuso ye-TGIF iqala nge-4 kunye neLifa le-TGIF liqala nge-5.
Oku kunokusetyenziselwa uthungelwano lwe-DMR +. Ihlala ingumgaqo ofanayo.
Yigcwalise ngolu hlobo lulandelayo: (kufuneka utshintshe i-Brandmeister kunye ne-password ye-TGIF, i-ID ye-DMR, njl.
Idilesi = = 127.0.0.1
Idilesi yasekhaya = 127.0.0.1
Indawo yangaphakathi = 62031
UmgaqoTrace = 0
Idayemon = 1
Ingxaki = 0
Ixesha lokuphuma = 20
Ukukhuphela = 20
UmbonisoLevel = 0
IFayileLevel = 1
IFayilePath = / var / log / pi-star
IFayileRoot = DMRGateway
Inikwe amandla = 1
Ulwimi = en_GB
Isikhokelo = / usr / sendawo / njl / DMR_Audio
Inikwe amandla = 0
I-TXFrequency = 430995000
Amandla = 1
Ubude = SELECT_YOUR_LATITUDE
Ubude = -SELECT_YOUR_LONGITUDE
Ukuphakama = 0
Indawo = "Estoril"
Inkcazo = "Portugal"
I-URL = https: //www.network-radios.com
Ukuqalisa = 950
Ifayile = / usr / yendawo / njl / XLXHosts.txt
Izibuko = 62030
Iphasiwedi = passw0rd
Ixesha lokulayisha kwakhona = 60
Indawo yokubeka = 2
I kZ 6
Isiseko = 64000
Qhagamshela = 60
I-ID = ENTER_YOUR_DMR_ID
UmsebenzisiControl = 1
[Inethiwekhi yeDMR 1]
Idilesi = 193.137.237.12
Izibuko = 62031
Indawo = 62037
Ukubhalwa kwakhona0 = 2,9,2,9,1
Ukubhala kwakhona kwePC0 = 2,94000,2,4000,1001
UhloboUkubhala kwakhona0 = 2,9990,2,9990
Bhala kwakhona iSrc0 = 2,4000,2,9,1001
IPassAllPC0 = 1
IPassAllPC1 = 2
Igama lokugqithisa = "ENTER_YOUR_PASSWORD"
Igama = SELECT_YOUR_BM_MASTER
[Inethiwekhi yeDMR 2]
Idilesi = 168.235.109.210
Izibuko = 55555
Ukubhalwa kwakhona0 = 2,8,2,9,1
Ukubhalwa kwakhona1 = 2,80505,2,505,1
Ukubhalwa kwakhona2 = 2,80800,2,800,100
Ukubhalwa kwakhona3 = 2,83801,2,3801,8
Ukubhalwa kwakhona4 = 2,89990,2,9990,1
Ukubhalwa kwakhona5 = 2,80001,1,1,9999
Ukubhalwa kwakhona6 = 2,80001,2,1,9999
Ukubhala kwakhona kwePC0 = 2,84000,2,4000,1001
Igama lokugqithisa = "IPHEPHA ELILANDELAYO"
Igama = DMR + _IPSC2-QUADNET
[Inethiwekhi yeDMR 3]
Igama = TGIF_Network
Ukubhala kwakhona kwePC1 = 1,5009990,1,9990,1
Ukubhala kwakhona kwePC2 = 2,5009990,2,9990,1
UhloboUkubhala kwakhona1 = 1,5009990,1,9990
UhloboUkubhala kwakhona2 = 2,5009990,2,9990
Ukubhalwa kwakhona1 = 1,5000001,1,1,999999
Ukubhalwa kwakhona2 = 2,5000001,2,1,999999
Bhala kwakhona iSrc1 = 1,9990,1,5009990,1
Bhala kwakhona iSrc2 = 2,9990,2,5009990,1
Bhala kwakhona iSrc3 = 1,1,1,5000001,999999
Bhala kwakhona iSrc4 = 2,1,2,5000001,999999
Idilesi = tgif.network
Iphasiwedi = ENTER_YOUR_TGIF_LEGACY_PASSWORD
Indawo = 0
[Inethiwekhi yeDMR 4]
Igama = TGIF_Network_Prime
Ukubhala kwakhona kwePC1 = 1,4009990,1,9990,1
Ukubhala kwakhona kwePC2 = 2,4009990,2,9990,1
UhloboUkubhala kwakhona1 = 1,4009990,1,9990
UhloboUkubhala kwakhona2 = 2,4009990,2,9990
Ukubhalwa kwakhona1 = 1,4000001,1,1,999999
Ukubhalwa kwakhona2 = 2,4000001,2,1,999999
Bhala kwakhona iSrc1 = 1,9990,1,4009990,1
Bhala kwakhona iSrc2 = 2,9990,2,4009990,1
Bhala kwakhona iSrc3 = 1,1,1,4000001,999999
Bhala kwakhona iSrc4 = 2,1,2,4000001,999999
Idilesi = prime.tgif.network
Iphasiwedi = ENTER_YOUR_TGIF_PRIME_HOTSPOT_PASSWORD
ezaposwa ngomhla Julayi 30, 2018
Yintoni asenzele yona amaRoma?
Hayi! Umgca ongafiyo osuka eMonty Python!
Kakuhle phakathi kwezinto ezininzi ezintsha, enye eyasenzelwa ngamaRoma yayikukuchaza ngokutsha indlela yethu.
Uguquko kuyilo lwendlela
Ukulunga uyazi ukuba zazinjani iindlela ngaphambi kokuba amaRoma azise itekhnoloji entsha ukuba ithwale, kodwa kubonakala ngathi ngekhe zichaneke ncam!
AmaRoma aqonda nangona kunjalo ukuba eyona ndlela ikhawulezayo ukusuka ku-A ukuya ku-B yayingumgca othe tye; Kungenxa yoko le nto intsalela yeendlela zabo zinqumleza iYurophu, nokuba zazikhona iinduli endleleni, oko kubonakala ngathi.
Ngoku kwenzeka ntoni emhlabeni malunga neG7DDN ngoku? Ngaba ekugqibeleni ulahlekelwe ngamabhastile akhe? Ewe mhlawumbi ucinga ukuba sele ndinayo (!), Kodwa ndothuke, ndibona ukufana apha neeRadiyo zenethiwekhi.
Xa irediyo ye-Amateur yayikwisihombo sayo esipheleleyo, “ukhuphiswano” njengokuba lwalunjalo, lwalungabalulekanga kwaye lungabalulekanga.
Ukutsalela umnxeba kumazwe angaphandle kwakubiza kakhulu; IHam iRadio bekufanele ukuba ungene kuyo kuphela xa ujonga ngokwezezimali, kodwa ubuye wanemincili yokuthumela imiqondiso kwihlabathi liphela…
Irediyo ye-CB yayise-UK ubuncinci okokuqala, ngokungekho mthethweni, kwaye emva kokuba isemthethweni, inqunyelwe kwi-11m FM kunye nee-watts ezi-4-akukho nto inokukhathazeka malunga nokuba umnyango olandelayo u-10m Ham Band ungadlulisa ii-watts ezingama-400 ze-SSB okanye ze-CW.
Irediyo yasimahla ye-446MHz kwi-500mW yayingangqinelani ne-70cms ene-watts ezingama-400 kunye nokuphindaphinda kunye neesathelayithi.
Esi sesinye sezizathu zokuba iiHams zingakhange zithathe iisignigns zabo kunye neenkqubo kwi-11m nakwi-446MHz umzekelo. Kwakungekho ngqiqweni ukwenza njalo.
Abantu ngokwendalo bathathe "indlela yokunganyangeki" - kancinci njengee-elektroni!
Ingxaki ngo-2018 kukuba kukho "ukhuphiswano" lokuzonwabisa kwaye kukhuphiswano olukhulu lwemipu!
I-intanethi ivumela nabani na, ngaphandle kwendleko, ukuba afake umbala kwiifowuni zevidiyo kwihlabathi liphela.
Ungamthelekelela umntwana wakho oneminyaka eli-14 ubudala okanye umzukulwana wakho esenza oku, ngelixa ungahlala etyotyombeni lakho, ukhalazela ukungabikho kwemeko kwi-20m okanye ukungabikho komsebenzi kwi-144MHz.
Ngaba kuyamangalisa ukuba abantu abaqhelekileyo "abayifumani" iRadio ka-2018?
Into abayenzayo, njengathi sonke, balandela eyona ndlela ilula yokwenza umsebenzi.
Iyakhula kwaye iyakhula…
Ngoku ukukhula kwentshukumo yeeNethiwekhi zeeRadiyo kwilizwe lonke kuyamangalisa, kodwa kwinqanaba elinye alothusi.
Okokugqibela, ineeNethiwekhi zeeRadiyo, ezingenabuhlungu ukwenza unxibelelwano kwihlabathi liphela, nokuba injani na imeko ye-Ionosphere.
Emva kwayo yonke loo nto ukuba usebenzisa i-Intanethi njengokusasaza endaweni yoko, awuzukuba naxhala malunga nezinto ezinje nge-K-Index okanye imeko yomjikelo welanga. (Kumnandi nangona oko kulilungelo lalo!)
Kwaye andigxeki "iRadio" yesiqhelo kaHam ngendlela; Ndisayisebenzisa rhoqo.
Into endiyithethayo awunakugxeka abantu ngokuhamba "indlela ethe tye", indlela yokunganyangeki, ukuba eneneni into abafuna ukuyenza kukunxibelelana nabathandi bonomathotholo abathanda izinto ezifanayo.
Emva kokuba ndinike intetho kwiiRadiyo zeeNethwekhi kwiklabhu kutshanje, enye indoda yathi, “Kulungile konke oku, kodwa ingxaki kukuba, kulula kakhulu!”
Kuyinyani ngokwaneleyo - kodwa ngaba sanele ngokwaneleyo isizathu sokuyichitha?
Ngamanye amaxesha, kuyo nayiphi na into oyithandayo, ngaba asifuni ukuba izinto zibe lula kancinci?
Ayisiyi6 ibhayisekile ohamba ngayo kwibhayisikile yakho yaseDatshi ukubona umhlobo wakho ngolwe-Lwesithathu inguquko entle ukusuka kwi-80km sprint oyenzayo rhoqo ngeMigqibelo kwibhayisikile yakho yokubaleka neklabhu yakho yalapha?
Ngamanye amaxesha, ndiyathanda ukuncokola nezikhululo ze-VK kwiiNethiwekhi zeeRadiyo, kunokuba ndihlale ubusuku bonke ndizama ukubasebenza okwexeshana kwi-80m.
Ewe kukho uvuyo ukwenza oko kungenakubakho kwiiRadiyo zeNethiwekhi, kodwa kukwakhona ukwaneliseka okuza nokwenza abahlobo bakanomathotholo eOstreliya endinokuthetha rhoqo nabo - kwaye awuyifumani loo nto kwi-80m.
Kuphela nje "ngamahashe ezifundo".
Zombini kwaye ', hayi' nokuba 'okanye'…
Akukho mntu ucebisa ukuba iiRadiyo zeNethiwekhi ziya kuthatha indawo yesiqhelo seRadio yeHam - inyani ayinakuyenza loo nto.
Kodwa, uyazi, akukho mntu ndiyaziyo ucebisa ukuba.
Ewe intsha (-ish), ewe yahlukile, ewe ilungile, kwaye ngentsi, ingaba kumnandi!
Kwaye, ngaphandle kokuba ndiphazama, abantu bathatha umdlalo wokuzonwabisa ukuze bonwabe, ngaphezulu kwako konke.
Kwaye andiboni nto iphosakeleyo kuloo nto!
30I Julayi 2018
Umthombo wefoto: Wikimedia Commons
ezaposwa ngomhla Ngamana 28, 2018 Ngamana 28, 2018
Phumelela iTransceiver ESIMAHLA
Funda ngendlela yokuphumelela irediyo yenethiwekhi ESIMAHLA! Akunakuba lula! Le yeyona sweepstake yentsha ye-Anysecu 3G-W2- unomathotholo womnatha oshukumayo onomboniso omkhulu, wokusetyenziswa ngokulula kweselfowuni! Ingaba ulunde ntoni?
Eli lithuba lakho elihle lokuphumelela i-transceiver yenethiwekhi yasimahla- i-Anysecu 3G-W2
Akukho mfuneko yokuba uthenge nantoni na. Konke okufuneka ukwenze ukubhalisa kwincwadana yethu kwaye ufumana ukungena simahla kwi-sweepstake eyakwenzeka nge-30/06/2018.
Siza kuqhagamshelana ophumeleleyo nge-imeyile ke qiniseka ukuba uyongeza idilesi yemeyile kubafowunelwa bakho ukuze ingagqibi kwifolda yogaxekile. Idilesi yethu ye-imeyile ngu info@network-radios.com
Kodwa ungawonyusa amathuba akho okuphumelela, ngokufumana amangeno asimahla kwi-sweepstake! Jonga ukuba ungawafumana njani amangeniso ongezelelweyo:
Nje ukuba ubhalise, uyakufumana ikhowudi yakho eyahlukileyo kwaye kufuneka wabelane nabahlobo bakho. Jonga ukuba ungawanyusa njani amathuba akho:
Ukubhalisa ngakunye kuthunyelwe + i-100
Yabelana kuFacebook +10 amangeniso
Yabelana kuTwitter +10 ukungena
Yabelana kuGoogle + + amangeniso
Yabelana kuWhatsApp +10 amangeniso
Yabelana ngePinterest +10 ukungena
Bhalisa nje ngezantsi. Nje ukuba uyenze, ungajonga ukuba mangaphi amangeniso owafumeneyo! Umnqweno omhle!
Funda nathi umthetho wabucala kwaye Policy Cookie
ezaposwa ngomhla Ngamana 4, 2018 Ngamana 4, 2018
Iipesenti ezili-10 kuzo zonke iiRadiyo
Bhalisa i-Newsletter yethu yeHamradio kwaye ufumane isaphulelo se-10% xa uthenga ngokulandelayo!
Fumana iindaba zamva nje zerediyo zamva nje! Ungaphoswa zindaba ezimnandi malunga neeNethiwekhi zeeRadiyo kunye neeMowudi ezintsha zedijithali, ezinje ngeDMR, D-Star kunye nezinye. Silindele wena! 🙂
* kubonisa ukuba kuyadingeka
ezaposwa ngomhla Matshi 7, 2018
Ungathini ukuba unokuba nefayile ye- Uthungelwano lwezixhobo eziphathwayo nezisasazwayo ezinogubungelo lwehlabathi? Khohlwa ngabaphindayo kunye neelayisensi ezibizayo Yonke into iza kusebenza ngenethiwekhi yeselula ye-3G / 4G.
Nokuba ufuna i-1-to-1 okanye i-1-to-many zonxibelelwano ngonomathotholo, le yeyakho.
Akukho luhlu lubhalisiweyo. Ukuba ukhuselwe ngeselula, uqhagamshelwe! Oku kuthetha ukuba unomathotholo ngamnye unokuba kumazwe ahlukeneyo, kwaye usanxibelelana nabantu osebenza nabo.
Umgama mde owenza i-PTT4U iiradiyo?
Akukho mda. Ukuya kuthi ga ngoku une-GSM / 3G / 4G okanye iWiFi (iimodeli ze-Android) uya kuba nokufikelela. Oku kuthetha ukuba uxhomekeke kuphela kwinkonzo yenethiwekhi yeselfowuni, okanye kwi-WiFi hotspot.
Kutheni le nto ingcono xa kuthelekiswa nee-walkie talkies zesiko?
Iindlela zakwantu zoonomathotholo ziya kuhlala zinomda ngomgama kunye nokuphazamiseka. Njengoko sisebenza ngonxibelelwano lwedijithali oluthembele kwizithwali zeeselfowuni, uya kuhlala unamava nonxibelelwano olukhulu nolucacileyo lokungenelela. Ngaphandle koko, awudingi ukutyala imali kwizakhiwo zeradiyo ezibizayo, njengeziphindayo, iinqaba, ii-eriyali okanye iindawo zokuqeshisa.
Ngubani onokuxhamla kwi-PTT4U?
Iiteksi kunye neenkampani zothutho ngokubanzi, ukuthotyelwa komthetho, oonogada babucala, iisayithi zokwakha, izinto ezisetyenziswayo, ukuhambisa iibhokisi, icandelo lezolimo, kunye naye nabani na ongomnye ufuna indlela zonxibelelwano ngonomathotholo ngobuchule ngaphandle kothintelo lwoluhlu.
Ndifuna ukugubungela indawo ebanzi kwaye kwiindawo ezininzi. Ndidinga iseti yokuphindaphinda kunye nee-eriyali?
Hayi. Inkonzo yethu isebenzisa uthungelwano lweziphathi ze-GSM / 3G / 4G. Awudingi ukutyala imali kuyo nayiphi na inethiwekhi yesakhiwo, ngaphandle kweselfowuni okanye iiradi eziphethwe ngesandla.
Ngaba iyasebenza nakweliphi ilizwe?
Ukuya kuthi ga ngoku ukufikelela kwi-intanethi (nge-3G / 4G okanye kwi-WiFi) ungasebenzisa inkqubo yethu, nokuba ithini indawo.
Ngaba abasebenzisi banokuthetha phakathi kwabo, ukuba bakumazwe ahlukeneyo?
Ewe. Nawuphi na umsebenzisi angathetha naye nawuphi na omnye umsebenzisi, nokuba uhlala phi na.
Ndingayisebenzisa unomathotholo we-PTT4U njengomnxeba oqhelekileyo?
Zonke iiradiyo ezisekwe kwi-android zinokwenza kwaye zifumane iifowuni kunye ne-SMS / isicatshulwa. Iimodeli ezingezizo i-android azinakusetyenziswa njengeefowuni.
Ndingasebenzisa naliphi na ikhadi leSIM?
Ewe unokusebenzisa nayiphi na i-SIM khadi ye-GSM. Zonke iiradiyo zethu zivuliwe zeSIM kwaye ziyahambelana nayo nayiphi na inethiwekhi ye-GSM / 3G / 4G / LTE.
Ngaba uyaba nikela ngeeradi ze-PTT4U kunye nekhadi leSIM?
Hayi. Kuya kufuneka ufake eyakho iSIM khadi.
Yintoni eza nerediyo nganye?
Yonke ipakethe yerediyo ibandakanya unomathotholo, itshaja, ibhetri, i-eriyali, iklip yebhanti kunye nentambo ye-usb. Inkqubo ye- unomathotholo isazisa isibiyeli esinyukayo, imakrofoni kunye ne-antenna yangaphandle ye-GPS.
Ngaba i-PTT4U Android iiradiyo zifuna iSIM khadi yokusetyenziswa ngokungqongqo kwe-WiFi?
Hayi. Ukuba ufuna ukusebenzisa isiginali yeWiFi, ayifuneki ikhadi leSIM.
Ndingayisebenzisa eyam i-smartphone ye-android ngale nkonzo?
Ewe. Kufuneka ufake nje yethu Isicelo se-PTT4U kwi-smartphone yakho.
Ndingazisebenzisa iiradiyo ze-PTT4U ezineeCDMA, njengeVerizon eMelika?
Hayi. Zonke iiradiyo zethu zifuna umphathi ophethe i-GSM. Iiradiyo zethu ze-4G / LTE azinakusetyenziswa kunye neVerizon, kuba zifuna ukuvunywa kwangaphambili kwesixhobo ngasinye kwinethiwekhi.
Ndingazisebenzisa iiradiyo ze-PTT4U nge-AT & T okanye T-Mobile, e-US?
E-US, iiradiyo zethu ziya kusebenza kakuhle nge-AT & T kunye neT-Mobile. EYurophu, e-Australia nase-Afrika nayo iya kusebenza ngaphandle kwemicimbi.
Ngaba ndingasebenzisa iiradio ze-PTT4U xa ndingekho kwi-grid, elwandle umzekelo?
Udinga uqhagamshelo lweintanethi ukuze usebenzise oonomathotholo bethu. Unokusebenzisa indawo ene-satellite njenge Le ezakukunika ingxelo yomhlaba wonke, nkqu nonxweme.
Kwenzeka ntoni ukuba andinayo i-intanethi?
Ukuba awukwazi ukufumana i-3G okanye i-WiFi ngelishwa ayizokwazi ukunxibelelana nenethiwekhi yethu. Nangona kunjalo, usenokukwazi ukuyisebenzisa njengefowuni eqhelekileyo ukuba ufumana uphawu olwaneleyo lwe-GSM 2G.
Yintoni umsebenzi weqhosha le-SOS koonomathotholo?
Iqhosha le-SOS liya kuthumela i-alamu kubo bonke abasebenzisi, libonise indawo yomsebenzisi ocinezele iqhosha le-SOS.
Yimalini idatha efuna iiradio ze-PTT4U ngenyanga?
Ukusetyenziswa rhoqo, isicwangciso sedatha se-500 MB sanele. Kwiimeko ezigabadeleyo, apho unxibelelwano lwenzeka ixesha elide, isicwangciso sedatha ye-1 GB sinokufuneka
Ngaba unikezela ngenkqubo yokuthumela?
Ewe ungayifaka inkqubo yokuhambisa nakweyiphi na iWindows PC kwaye unxibelelane nabaphi na abasebenzisi, jonga indawo yabo kwimephu, isantya, thumela imiyalezo yobuqu, wenze imfihlo ngasese kunye namaqela.
Ndingajonga indawo ekuyo iGPS yabasebenzisi?
Ewe ungakhangela indawo yokwenyani yabo bonke abasebenzisi kwaye ujonge ukulandelela kwabo.
Ngaba ungawachaza amalungelo entetho, kunye neemvume zeprofayili zomsebenzisi ngamnye?
Ewe, zonke iinkcukacha zingasetwa.
Ngaba i-radios ze-PTT4U zinokwenza imfihlo kwaye amaqela afowunele abanye abasebenzisi?
Ewe unokwenza zombini ezi fowuni.
Ngaba i-PTT4U iiradi zingathumela imiyalezo yabucala kwabanye abasebenzisi?
Ewe, ungathumela imiyalezo yabucala kuye nawuphina umsebenzisi.
Ngaba kufuneka ndibhalise kuyo nayiphi na inkonzo ukuze ndisebenzise i-PTT4U?
Ngaphandle kokuba nesicwangciso sedatha kunye nomphathi weselfowni, kuya kufuneka urhumele eyethu PTT4U ubhaliso lonyaka.
Ndibhatala malini kumrhumo we-PTT4U?
Ixabiso lethu lonyaka lokubhalisa kwirediyo nganye linokujongwa Apha.
Kutheni ungasebenzisi ifowuni nje xa nithetha?
Inethiwekhi yethu yobuchwephesha iphantse yabakho kwangoko, ngaphantsi komzuzwana omnye ukuya kwinqanaba lokucinezela i-PTT kwirediyo enye kwilizwi lakho ukuphuma kwenye okanye enye, kwaye ungathetha ukuya kuthi ga kwi-1 ngaxeshanye, Kukulungele ukunxibelelana nabasebenzi basentsimini okanye abasebenzi bokujikeleza.
Kwenzeka ntoni ukuba umncedisi angaxhunyiwe kwi-intanethi?
Akunakulindeleka oko. Sinee-server ezingama-21 ezixhaswayo, ezibekwe ngobuchule, zibanjwe zii-IDC zikarhulumente (Amaziko eDatha ye-Intanethi) eMantla nakuMbindi Merika, eBrazil, eNgilani, eJamani, eHong Kong, e-Australia, eSingapore nakwezinye iindawo. Kwimeko yokuthotywa kwenkonzo, unokuthembela kubuchwephesha beQela le-IT elifanelekileyo kunye neminyaka elishumi yamava kushishino lwe-PTT ngaphezulu kweSelula (POC).
Ndingayihlawula njani iiradiyo?
Unokuhlawula nge-Paypal okanye naliphi na ikhadi lekhredithi.
Ndingawuhlawula njani umrhumo?
Ndingahlawula iiradiyo kunye nobhaliso kunye?
Ewe usebenzisa iPaypal. Siza kukubonelela ngetyala eliphindaphindayo, apho intlawulo yokuqala lixabiso likanomathotholo kunye nomrhumo wokuqala wobhaliso. Uza kubona oku kucacisiwe "njengentlawulo yokubhalisa" kwinkcazo nganye yemveliso. (unomathotholo ubandakanyiwe)
Ngaba unika ezinye iindlela zokuhlawula?
Ndingangu mthengisi wakho?
Ewe, sifuna abathengisi kwihlabathi liphela. Ndiyacela Qhagamshelana nathi. Ungajonga uluhlu lwethu lwabathengisi Apha.
Ndidinga isixa esikhulu soonomathotholo. Ndingazama ngaphambi kokuba ndithenge?
Hayi okwangoku. Kodwa ungathenga enye yethu Iiphakheji zokuqalisa Ngexabiso lesaphulelo, ngaphambi kokuba utyale imali kuninzi lweeradiyo / imirhumo.
Ndingafumana isilingo sasimahla?
Asiyi kunika inkqubo enjalo okwangoku. Siqinisekile ukuba uyayithanda inkqubo yethu.
Ndidinga imirhumo eli-10 okanye ngaphezulu. Ndingasifumana isaphulelo?
Ewe, bona izaphulelo zethu Apha.
Ukuba ndiya-odola namhlanje, ndizakuhlawulwa namhlanje? Kwaye ubhaliso luqala nini?
Uya kuhlawuliswa ngalo mzuzu ugcwalisa iodolo yakho. Ubhaliso lonyaka omnye luya kuqala ukubala kuphela xa ufumana iiradiyo kunye sibuze ukwenza umrhumo usebenze. Ndiyayithanda le nto, ukuba uthe wasilela kwintlawulo ephindaphindayo, usenalo ixesha lokuphinda usebenze, ngaphandle kokulahla inkonzo ye-PTT.
Ndingafumana umrhumo wenyanga?
Okwangoku, sinikezela ngemirhumo yonyaka kuphela.
Ngaba ubonelela ngokufikelela kwi-API ukuze ndikwazi ukusebenzisa eyam isoftware ukujonga indawo yomsebenzisi?
Ewe unokufikelela kwi-API ukuze usebenzise ezakho izisombululo zendawo.
Ngaba unika unxibelelwano oluphindwe kabini?
Zonke iiradiyo zethu ze-android zivumela ukufowunelwa rhoqo kweefowuni, kwindawo epheleleyo. Xa usebenzisa unxibelelwano olufana nonomathotholo ne-PTT4U, lonke unxibelelwano luya kuba lula.
Ngaba iiradiyo zakho zineSIM ezimbini?
Uninzi lweeradiyo zethu zibonelela ngeSIM slot. Jonga ii-specs zerediyo nganye.
Ngaba uyabhala ngemfihlo unxibelelwano?
Ewe, lonke unxibelelwano lubhalwe ngokufihliweyo ngumgaqo-nkqubo wobunini kwaye kuphela ngumlawuli wenethiwekhi yombutho wakho onokufikelela kulwazi lwembali.
Ndinombutho omkhulu. Ngaba ndingalawula iqonga ngokwam?
Ewe ungalawula bonke abasebenzisi, amaqela, amalungelo okuthetha, njl, ngokuhambelana neemfuno zakho.
Ngaba le yeyam?
Nawuphi na umzi mveliso olandelayo unokusebenzisa isisombululo sethu:
I-Courier, iTeksi, iNkonzo yeLimo, iTraki yethayile, uloliwe, isikhululo seenqwelomoya, izibuko lolwandle, uloliwe omncinci, iMRT, uLungiselelo
Ukwakhiwa kweSiza, ukuhanjiswa kwesamente, uMbane, ukumba, ukuCocwa kwamanzi, ukuPhahla
Inkonzo yoLondolozo loKhuseleko, ihotele, iCondo, iiOfisi, umzi-mveliso, iminyhadala yezemidlalo, ezeMfundo
Irestyu, ihotele, Irizothi, Ivenkile yokuthenga, Ivenkile enkulu yokuthengisa
Amapolisa, amaSebe kaNothimba, iMisebenzi yoLuntu, amaSebe aManzi
Abathengi abaninzi babucala basebenzisa inkonzo yethu ukuhlala benxibelelana nosapho kunye nabahlobo
Oku kuyonwabisa ngokwenene! Ngaba oku kuyinyani?
Ewe yiyo. Kwaye kufuneka sivumelane: oku kuyamangalisa! Fumana eyakho iphakheji yokuqalisa namhlanje ngesaphulelo!
ezaposwa ngomhla January 11, 2018
RT4 -Thetha njengeziLungelo
Ngomgangatho ophezulu isithethi semakrofoni, ungasebenzisa i Irediyo-Tone RT4 njenge pro yokwenyani. Imakrofoni ide ize nesokethi eyi-3.5mm ukunxibelelana nomqala.
TheIrediyo-Tone RT4 bubume bobugcisa kwi-Android POC Radio. I-RT4 yiradiyo yesitayile esomeleleyo kakhulu, kunye nebhetri engapheliyo ye-4600mAh
ezaposwa ngomhla January 6, 2018
I-F22 ehlotyeni kunye ne-RT4 ebusika